Madaxda Burkina Faso oo ku baaqday in loo Midoobo dagaalka ka ... | Universal Somali TV
Madaxda Burkina Faso oo ku baaqday in loo Midoobo dagaalka ka dhanka ah Argagixisada kadib weerar dad badan lagu Dilay
Madaxweynaha Burkinabe Mr Roch March Kabore ayaa ugu baaqay Muwaadiniinta ku nool gudaha iyo dibada dalkaasi in gacanta ay isqabsadaan si loola dagaalamo kooxaha Argagixisada ee weerarada ka geysanaya dalkan ku yaal qaarada Afrika.
Mr Kabore oo qoraal soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitter-ka ayaa sheegay in dagaalyahanada Islaamiyiinta ay dhibaato ku yihiin Amaanka Qaranka.
Baaqaan ayaa yimid kadib markii 37 qof lagu dilay kadib weerar lagu qaaday kolonyo gaadiid ah oo ay la Socdeen shaqaale ka howlgala shirkad ka soo saarta macdanta oo ka howlgasha wadanka Burkina Faso.
Ra'isul wasaare Christophe Dabire ayaa dhankiisa sheegay in naxdin ay ku noqotay markii uu maqlay in dabley hubeysan ay qaarijiyeen 37 ruux oo ku safrayay meel u dhow shirkad macdanta ka shaqeysa oo laga leeyahay dalka Canada.
Ma Jirto ilaa iyo hada mas,uuliyada cid sheegatay weerarka dhacay Arbacadii Shalay iyadoo arintaan ay noqoneyso weerarkii ugu dhimashada badnaa tan iyo sanadkii 2015-kii.
Kan-xigaShaqaalaha Rayidka oo maanta aan xaad...
Kan-horeMareykanka oo wadamada caalamka ugu d...
54,568,809 unique visits